Help the Victims in Arakan: ဂီရိဆိုက်ကလုံး တစ်နာရီလျင် ပြင်းအား ၁၄၇ မိုင်နှုန်း ဖြင့်တိုက်ခိုက်နေ...
ဂီရိဆိုက်ကလုံး တစ်နာရီလျင် ပြင်းအား ၁၄၇ မိုင်နှုန်း ဖြင့်တိုက်ခိုက်နေ...
ဂီရိဆိုက်ကလုံးမုန်တိုင်းကြီး သည် တစ်နာရီလျင် ပြင်းအား ၁၄၇ တိုက်ခက်နေသည်။
နောက်ဆုံးတိုင်းထွာချက်များအရ ဂီရိဆိုက်ကလုံးမုန်တိုင်းကြီး သည် တစ်နာရီလျင် ပြင်းအား ၁၄၇ မိုင်နှုန်း၊ တစ်စက္ကန်.လျင် ၆၉ မိုင်နှုန်းဖြင်. ရခိုင်ပြည်တွင်းဝင်ရောက် တိုက်ခက်နေပါပြီ။ ၂၀၀၈ က တစ်နာရီမိုင် ၁၃၅ မိုင်နဲ.တိုက်တဲ.နာဂစ်ထက်ပြင်းထန်ကြောင်းသိရသည်၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် မကွေးတိုင်း တို့ ကို ဆက်လက်ဝင်ရောက်နိုင်သည်ဟု သိရသည်။
ကမ္ဘာ. သဘာဝဘေးအန္တရာယ်သတိပေးဌာန (The Global Disaster Alert and Coordination System ) ၏ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရ ဂီရီ မုန်တိုင်းသည် အဆင်.၅ (Category5) သို.ရောက်ရှိပြီး အပျက်အစီးအသေအဆုံးအများ အပြားရှိနိင်သည်ဟုသိရသည်။
မိုးလေဝသက ညွန်ချုပ်ဟောင်း ဦးထွန်လွင်ရဲ.သောကြာနေ.ည ၁၀ ၏ခန်.မှန်းချက်အရတော. “တစ်နာရီကို မိုင်(၁၀၀)နှုန်းလောက်နဲ့ တိုက်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ လေပြင်းတေါတိုင်လို့ အဆောက်အဦတွေပြို၊ သစ်ပင်တွေလဲ၊ ဓါတ်တိုင်တွေကျိုး ဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ကံကောင်းတာက မုန်တိုင်းဒီရေတွေမတက်ခဲ့တာပါဘဲ။ ညနေ(၆)နာရီခွဲလောက် ဆိုရင် ကုန်းထဲေ၇ာက်သွားပါပြီ။ အဲ.. ကုန်းထဲရောက်ပြီး နောက်ထပ်တစ်ရက် လောက် (၂၃-၁၀-၂၀၁၀)ညနေအထိ ရှိနေဦးမှာမို့ ကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသတွေ (မကွေးတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း)မှာ မိုးတော့ရွာဦးမယ်လို့ ခန့်မှန်းကြောင်းပါဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဒီကနေ့ ညပိုင်း(၃)နာရီလောက်အတွင်း မုန်တိုင်းဟာ သိသိသာသာအားလျော့ကျ လာတာကိုတွေ့ရလို့ မနက်ဖန်အတွက် အခြေအနေတွေကောင်းလာဖို့ရှိနေကြောင်း။”
ကျေးဇူးပြုပြီးဦးထွန်းလွင်ရဲ. သောကြာနေ့ည နောက်ဆုံး သတိပေးချက်တော့ ဒီလင်.ကို နှိပ်ပြီးကြည်.ပါ။
0 Responses to ဂီရိဆိုက်ကလုံး တစ်နာရီလျင် ပြင်းအား ၁၄၇ မိုင်နှုန်း ဖြင့်တိုက်ခိုက်နေ...